CODEYNTII Ballon d’Or oo Messi iyo Maxamed Saalax dartood loo joojiyay….(Maxaa dhacay?) – Gool FM
CODEYNTII Ballon d’Or oo Messi iyo Maxamed Saalax dartood loo joojiyay….(Maxaa dhacay?)
Byare October 11, 2018
(Europe) 11 Okt 2018. Waxaa dhawaan la soo saaray 30-ka Musharax ee ku tartamaya sanadkan abaal marinta laacibka ugu fiican adduunka ee Ballon d’Or.
Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi iyo Kylian Mbappe ayaa ka mid ah kuwa ugu cad cad iney ku guuleystaan abaal marinta ay bixineyso France Football.
Yeelkeede, Jariiradda reer France ayaa ku qasbanaatay inay joojiso Codeynta ay Aqristayaasha u sameynayeen xiddiga ku guuleysan kara Ballon d’Or Sababo la xiriira Lionel Messi iyo Maxamed Saalax dartood.
Inkabada 700,000 oo aqristayaal ayaa codkooda dhiibtay balse waxaa yaab noqotay in Codadkaasi ay 79% heleen Messi iyo Saalax oo qura.
Laacibka reer Masar oo Liverpool u dhaliyay 42-gool kal ciyaareedkii tagay Premier League iyo Champions League ayaa helay codad dhan 50% markii ay Codadkooda dhiibteen 250,000 aqristayaal ee ugu horreeyay.
Balse markii dambe Lionel Messi ayaa hogaanka kala wareegay xiddiga Reds kaddib markii ay soo Codeeyeen Aqristayaal dhan 700,000 oo wuxuu helay 48% halka Saalax uu helay 31%.
Xiddigaha sida wayn loogu saadaalinayay inay ku guuleystaan Ballon d’Or ee Cristiano Ronaldo iyo Luka Modric ayaa kala helay 8% iyo 2% oo qura, taa oo keentay in France Football ay joojiso gabi ahaan Codeynta Taageerayaasha, Maadaama ay bartilmaameedsanayeen ama ay codkoodu siinayeen oo qura laacibka reer Argentina iyo wiilka reer Masar.
Ku guuleystaha Ballon d’Or waxaa soo dooran doona Saxafiyiin heer sare ah oo ka kala socda Daafaha Caalamka.
Eden Hazard oo ka hadlay wararka xanta ah ee lala xiriirinayo inuu u dhaqaaqayo kooxda Real Madrid
Kooxaha Arsenal iyo Tottenham oo ku dagaalamaya saxiixa mid ka mid ah xidigaha Manchester United